सम्पादक पत्रकार हो, म्यानेजर होइन : युवराज घिमिरे – Media Kurakani
November 9th, 2017 Rabi Raj Baral Interview
पत्रकार युवराज घिमिरे तीन दशकदेखि पत्रकारितामा छन्। राजधानीबाट प्रकाशित ब्रोडसिट दैनिकहरू ‘कान्तिपुर’, ‘नागरिक’, ‘अन्नपूर्ण पोस्ट्’ र ‘राजधानी’मा सम्पादक रहिसकेका उनले भारतका ‘टेलिग्राफ’, ‘आउटलुक’ र ‘इन्डिया टूडे’लगायत पत्रिकामा काम गरेका छन्। हाल भारतीय पत्रिका ‘इन्डियन एक्सप्रेस’का स्तम्भकार घिमिरेसँग सम्पादकको भूमिका र सम्पादकीय स्वतन्त्रतालगायत विषयमा रविराज बरालले गरेको कुराकानी :
एकदमै चुनौतीपूर्ण हो । तर, एकअर्काको धर्मप्रति संवेदनशील भएसम्म समस्या आउँदैन । दुई–तीन वटा कुराले समस्या ल्याउँछ । पहिलो, मिडिया लगानीकर्ताका १० ठाउँमा लगानी छन्, लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्न वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई ठेगान लगाउन तपाईंले आफ्नो सञ्चारमाध्यम दुरुपयोग गर्न चाहनुभएन भने सम्बन्धमा मधुरता ल्याउँछ । तर, तपाईंले गर्नुभएन भने के गर्ने ? दोस्रो, विज्ञापन वा अन्य स्वार्थका लागि मान्छेलाई तर्साउने साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने धर्मभ्रष्ट भएको मानिन्छ । मैले भोगेको छु कि विज्ञापन ल्याउने क्रममा मिडियाको एउटा शाखाले गरेको व्यवहारबारे सम्पादकलाई थाहा नहुन सक्छ । तर, नाम सम्पादकको छापिन्छ । भोलि सम्पादकले यो विज्ञापनसँग मेरो सरोकार छैन भनेर अदालतमा भन्न त पाउँदैन । जबकि, व्यावहारिक रूपमा उसको भूमिका हुँदैन । बजार यति सानो छ तर मिडिया किन यति धेरै ? के हुन्छ भने तपार्इं मालिक हुनुहुन्छ, दुई–चार करोड खर्च गरेर मजस्ता दुई–चार पत्रकारलाई पाँच–छ महिनाका लागि जागिर दिनुहुन्छ । कतिपयको नियत पाँच–छ महिनामा अरू व्यापारबाट २० करोडको नाफा कमाऊँ वा कानुनभन्दा माथिको हैसियत हासिल गरूँ भन्ने हुन्छ । यो आपत्तिजनक हो । कानुनभन्दा माथिको हैसियत प्राप्त गर्ने मालिकको चाहना हुन्छ र यसमा सम्पादक तथा पत्रकारहरू प्रयोग हुन्छन् भने त्यो झन् आपत्तिजनक कुरा हो । हामी आफैंले पनि धेरै कुरा विश्लेषण गर्नुपर्ने छ, तर सम्पादकहरूको त्यस्तो निकाय नेपालमा छैन । र, अर्को अप्ठ्यारो के हुन्छ भने मालिकले विज्ञापनकै लागि सम्पादक ल्याउने प्रथा चल्यो भने झन् आपत्तिजनक हुन्छ ।
एकदम छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन दिँदैनस् वा यति पैसा दिँदैनस् भने यो फुटेज प्रसारण गरिदिन्छौँ भनेको अवस्था पनि छ । सम्पादक आफैंमा संस्था भएकाले ऊ सम्बन्धित मिडियाको पब्लिक अनुहार हो । प्रमोटर देखिन पनि सक्छ र नदेखिन पनि सक्छ । त्यसैले सम्पादक बढी सजग हुनु जरुरी छ । छापिएका कुराको दायित्व उसले लिनुपर्छ । कर्पोरेट प्रभाव बढ्दै जाँदा पत्रकारिताका मूल्यमान्यता निमोठिने र त्यसमा सम्पादक मौन रहने प्रवृत्ति प्रशस्त छ यहाँ । यसले व्यावसायिकतालाई घाटा पुर्‍याएको छ । सम्पादकहरूको सम्झौता र हामीकहाँ पत्रकारिताको नाममा भएको ब्ल्याकमेलिङले यसको मर्यादामा असर पारेको छ ।
हाम्रा मिडिया मालिकहरू नेपालमा ठूलो स्वार्थ भएको विदेशी दूतावासको तल्लो तहको कूटनीतिज्ञलाई खुशी बनाउन आफ्नो सम्पादकको अवमूल्यन गर्न पछि पर्दैनन् । मैले देखे भोगेको छु । विभिन्न दूतावासबाट केही आलोचना आउँदा म ती पत्रकारहरूको पक्षमा उभिएर कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर मालिकहरूलाई भनेको छु । मेरो पत्रकारिताको शुरुवात भारतबाट भयो । मैले राम्रा गुरुहरूसँग काम गर्ने अवसर पाएँ । भारतीय दूतावासको कुनै पनि तहको कर्मचारीले पत्रकारिता सिकाउने कोसिस गर्‍यो भने म स्वीकार्दिनँ । मैले भारतमा थुप्रै मानिससँग पत्रकारिता पढेको छु । त्यहाँको समाजवाद र त्यहाँको माटोबाट पढेको छु, त्यहाँका विभिन्न व्यक्तिहरूबाट पनि पढेको छु । म अझै पनि सिक्छु । तर, मलाई लाग्छ एउटा कूटनीतिज्ञको काम पत्रकारिता सिकाउने होइन । यी प्रवृत्तिलाई मैले चुनौती दिएको छु । मैले मालिकहरूलाई पनि भनेको छु कि यस्ता मान्छेहरूबाट पत्रकारिता सिकेर तपाईंहरूले यहाँ पत्रकारलाई हतोत्साही नगर्नुहोला । त्यो भारतीय होस् वा जुनसुकै दूतावास होस् । दुर्भाग्य मेरा साथीहरूले त्यो चुनौती मोलेका छैनन् ।
अन्नपूर्ण टुडेमा प्रकाशित।
Tags Editorial Freedom Editorial Independence Yuvaraj Ghimire
जुनियर रिपोर्टर र सम्पादक हुँदै मिडिया उद्यमी »
« समाचार कसरी बनिरहेको छ विज्ञापन माग्‍ने हतियार?